मनोजको अगाडी छात्तिमा प्वाल नै प्वाल, भाग्दै गरेको मान्छेलाई कसरी लाग्यो अगाडी गोली ? (स्थलगत रिपोर्ट) - Enepalese.com
मनोजको अगाडी छात्तिमा प्वाल नै प्वाल, भाग्दै गरेको मान्छेलाई कसरी लाग्यो अगाडी गोली ? (स्थलगत रिपोर्ट)
इनेप्लिज २०७४ फागुन १० गते ५:१० मा प्रकाशित
हिजो गुण्डा नाईके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए । केही दिन अगाडी भारतमा पक्राउ गरिएको समाचार आएको थियो तर इन्काउन्टर गरेपछि प्रहरीले जम्काभेटमा मारिएको बताएको छ ।
गोली लाग्दा पनि पुन भाग्न खोजेको बताईएको थियो । मनोज पुनको मृत शरिरमा छात्तिको अगाडीपट्टी गोलिले हानेका प्वालहरु देखिन्छन् । मृतक पुनको छात्तिमा गोलीका प्वाल नजिकै नजिकै छन् । भाग्दै गरेको व्यक्तिलाई कसरी अगाडी गोली लाग्छ ? पुनले हानेको गोली मोटरसाईकलमा मात्र लाग्नु र प्रहरीको सबै गोली अगाडी छात्तिमा लाग्नुले शंका उब्जिएको छ, कतै हत्या त थिएन ?
हेरौं यो रिपोर्ट